VIDIM-BARY : Mitohy ny famonoana afo amin’ny alalan’ny fivezivezena ataon’ny fitondrana
Raha fivoriana sy fihaonana ary fidinana nataon’ny minisitry ny varotra no nampidina ny vidim-bary dia efa nidina izany. 7 décembre 2017
Nivezivezy tao Toamasina tato ho ato ny minisitry ny varotra Chabani Nourdine. Ny talata lasa teo, dia tonga tao Toamasina indray ny tenany. Tamin’izany no nilazany fa iraky ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra izy hijery ny momba ny vidim-bary. Nisy ny fivoriana niarahany tamin’ireo lehiben’ny sampan- draharaham-panjakana isan-tokony nahitana mpitandro filaminana.
Fivoriana izay natao tao amin’ny lapan’ny faritra Atsinanana. Tamin’io fotoana io koa no nananganana ‘Task Force’ hanara- maso ny fanararaotana ataon’ny mpanafatra vary sy mpivaro- bary. Nomarihin’ny minisitry ny varotra Chabani Nourdine nandritra ny fitsidihana nataony tao Toamasina izao fa hamoraina sy hafainganina ny famoahana vary ao amin’ny seranantsambon’i Toamasina.
Tsy tonga anaty vilany
Karazany famonoana afo hatrany ireo fehetsiketsehana ataon’ny fitondrana momba ny resaka vidim-bary. Raha ny ao Toamasina manokana dia tsy mbola nahitana fihenana ireo vidim-bary eny an-tsena. Lasa resaka eny anivon’ny fiarahamonina sy ao anaty tambajotra sosialy io fitsidihana sy fivoriana lava ataon’ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana ao Toamasina io.
Tsy fivoriana intsony mantsy no ilain’ny vahoaka fa fidinan’ny vidim-bary mipaka any amin’ny aty vilanim-bahoaka. Momba ireo vary lo mitontaly 589 gony sarona tao Toamasina kosa dia mahagaga fa nafenin’ny sampandraharaham-paritry ny varotra Atsinanana mafy ireo mpanao gazety tao Toamasina ny fandorana ireo vary lo ireo. Fihetsika izay tena nahagaga ny maro.